I-Ultrasonic Transducer, i-Ultrasonic Vibration Series, i-Ultrasonic Generator-Qianrong
Esona sisombululo sisiso seSicelo sakho se-Ultrasonic
Ngaba ngumenzi wobugcisa wophando lwe-ultrasonic, amandla aphezulu okuphucula i-transducer kunye nemveliso e-China
I-ADVANTEJI YAMAZWE NGAMAZWE
Sikwindawo Hangzhou, kufutshane nesikhululo senqwelomoya sase-shanghai, esinomgaqo-nkqubo ogqibeleleyo kunye nokuhamba okufanelekileyo. Kwimarike yamanye amazwe, sinamava orhwebo aqolileyo kwaye azinzileyo.
INDLELA YOKUSEBENZA KUSHISHINO
QRsonic ijolise kuphando kunye nophuhliso lwezinto ze-ultrasonic kunye nokusetyenziswa. Kule minyaka, oomatshini be-QRsonic bafumana igama elihle kubathengi bethu kwi-China nakwimakethi yehlabathi.
I-QRsonic ngumenzi wobuchwephesha kuzo zonke iintlobo zezixhobo ze-ultrasonic. Singayamkela i-OEM kunye ne-ODM, ukubonelela abathengi ngesisombululo esipheleleyo sesindululo se-ultrasonic, umgaqo wokulinga, imveliso yemveliso njl.
I-20Khz ye-Ultrasonic eChongiweyo yeWelding Uphondo nge-A ...
Ubuninzi obuqhelekileyo be-20khz ye-Ultrasonic ye-Industrial homo ...
Ukuhamba rhoqo kwe-35Khz 1000w ye-Ultrasonic yokutywina i-E ...
Cuke Aluminium Guqula 20Khz 300 ...
Umzimveliso enemingxuma kunye Nickel Plate Welding ngu 3000w 2 ...
I-20Khz ye-Ultrasonic yokusika isixhobo seRubber esine-60m ...
I-20Khz 1500w ye-Ultrasonic yeWelding Transducer ene ...
15Khz 2600w Amandla aphezulu e-Ultrasonic Welding Oscil ...
Hangzhou Qianrong Ukuzenzekelayo Izixhobo Co., Ltd. ngumvelisi wobuchwephesha bophando lwe-ultrasonic, amandla aphezulu okuphucula i-transducer kunye nemveliso e-China. Ezona mveliso zethu ziphambili ziyi-transducer, umbane we-ultrasonic, i-ultrasonic i-welder yensimbi, iinxalenye ze-eriyali ye-eriyali yocingo njalo njalo. Ezi mveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwiinkalo ezahlukeneyo, ezinje ngeplastikhi ye-welding, i-welding yesinyithi, ukutywina okungalukanga nokusika njalo njalo. Ukususela ekusekweni kweQianrong Equipment, inkampani ibisoloko ijolise kwiimfuno zabathengi. Ngelixa sijonga intengiso yasekhaya e-China, sikwabonisa itekhnoloji ye-ultrasonic yenkampani yethu kwihlabathi. Umgangatho kunye nokusebenza kwayo kuyaziwa kolu shishino.
I-Ultrasonic transducer i-Impedance ihlaziya ...
I-40Khz ye-Ultrasonic yeNano Spray Isixhobo nge-Fr ephezulu ...
Precision Small Ukutshiza Machine for Scientific ...
Ultrasonic Ultrasonic Spot Welding Machine kunye Digi ...
Ukutshintsha inaliti yesiNtu kunye nokuThungwa kweMisonto ...
I-20Khz 2000w ye-Ultrasonic Transducer Booster Assem ...
I-15 Khz ye-Ultrasonic yeWelding Generator Transducer ...
Ukubonelela nge-30Khz ye-Ultrasound Cutting Device ye-R ...